Home Wararka Siyaasiyiinta Somaliland oo qaadacay doorashada, fashilkana ku eedeeyay RW Rooble
Ra’iisal Wasaare Rooble ayaa lagu eedeeyay in uu fashiliyay doorashada dalka, waxaana odoyaasha dhaqanka ku eedyeeyay in uu baalmaray mas’uuliyadii loo igmaday.
Boqor Buurmadoow oo ugu horreeyn la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in aysan waxba kala socon doorashada Golaha Shacabka ee Somaliland, isla markaana ay shacabka iyo Beesha Caalamka u caddeynayaan inay baxeeb doorashada dalka.
Boqorka ayaa Ra’iisul Wasaare Rooble ku eedeeyay inuu faragelin ku haayo doorashada oo uu la wareegay hannaankii doorashada, kana dhigay xafiiskiisa Cabdale Shideeye lagu sameeyo been abuurka, waa sida uu hadalka u dhigay.
Wuxuu intaas kusii daray Boqor Cismaan Boqor Buurmadoow in aysan waxba kala socon doorashada Jadwalkeeda xiligaan lasoo saaray oo uu xusay inuu ogyahay oo kaliya Guddiga Guddiga doorashada Somaliland.
“Waan ka baxnay Doorashadii Soomaaliya waxaan halkaan isugu nimid in aan u cadeyna Beesha caalamka iyo Soomaaliba’ Marka aan garan wayne cid aan kaga Dacwoona Raysal wasaaraha Beeshiisa xitaa waan ugu dacwoonay” ayuu yiri Boqor Buurmadow.
Previous articleUAE uses ‘humanitarian diplomacy’ to mend fences with Somalia
Next articleAbiy Axmad oo u yeeray C/raxman Ciro si uu qeyb uga noqdo heshiiska Somaliland iyo Itoobiya
Khasaaro ka dhashay weerar ka dhacay Shabeellaha Hoose (Faah-faahin)